Qore: Samee, Daabac, oo Dalbo Tilmaamaha Codka iyo Qaabka Summadaada Kaaliyaha Qoraalka ee AI | Martech Zone
Sida shirkadu u hirgeliso hagaha calaamadaynta si loo hubiyo joogtaynta ururka oo dhan, waxa kale oo aad muhiim u ah in la horumariyo codka iyo qaabka ururkaagu si joogto ah fariimaha ugu wanagsan. Codka summadaadu waa muhiim si aad si hufan ugu gudbiso kala duwanaanshiyahaaga iyo inaad si toos ah ula hadasho oo shucuur ahaan aad ula xidhiidho dhagaystayaashaada.
Waa maxay Hagaha Codka iyo Qaabka?
Halka hagaha calaamadaynta muuqaalku ay diiradda saaraan calaamadaha, xarfaha, midabada, iyo qaababka kale ee muuqaalka, hagaha codka iyo qaabka ayaa diiradda saaraya hadalka, ereybixinta, iyo lahjadda ay isticmaasho astaantaada marka ay dadku ku dhegaysanayaan ama wax kaa akhrinayaan.
Waxaa jira dhowr arrimood oo sumadda ah oo ay tahay inaad ku darto hagaha codkaaga iyo qaabka:
Dadka - waa maxay dhammaan sifooyinka dhaqanka, tirakoobka, waxbarashada, iyo juqraafiga ee macmiilka aad beegsanayso?
aragtida - waa maxay aragtida aad jeclaan lahayd in shakhsiyaadkaaga ay ka qabaan astaantaada?
Hawlgalka - waa maxay qoraalka hadafka guud ee astaantaada?
Tone - waa maxay codka aad rabto inaad isticmaasho si aad si fiican ula falgasho dhagaystayaashaada? Ma doonaysaa in aad ahaato mid aan rasmi ahayn, togan, tamar leh, mid gaar ah, ciyaarid, dhiirigelin leh, iwm.
Sinnaan - kelmadee ayaa la mid ah astaantaada, alaabtaada, ama adeegyada aad rabto in si joogto ah loo isticmaalo?
Lahjadda - kelmadee waa inaan marnaba loo isticmaalin in lagu qeexo summadaada, alaabtaada, ama adeegyadaada?
Astaamo - Waa maxay erey-bixinta gaarka ah ee warshadahaaga ama ururkaaga ee ay tahay inay ahaato mid joogto ah?
Custom - Waa maxay erey-bixinno caado u ah summadaada, badeecadaada, ama adeeggaga oo aanu qofna isticmaalin?
Tusaale: Mid ka mid ah macaamiisheena muhiimka ah ayaa leh goob aad awoodid ka dalbo lebbiska online. Labbisku waa kuwo dhexdhexaad ah laakiin tayo sare leh, waxaan isticmaalnaa erayo la mid ah kuwa la awoodi karo oo raqiis ah… taas oo macno xun u yeelan doonta tayada. Waxaan sidoo kale sheegnaa dhib la'aan soo noqda halkii khasaare-la'aan soo noqda. Halka ay labadooduba macno isku mid ah leeyihiin, iyagoo ereyga haysta free Goobta oo dhan waxay dejinaysaa cod khaldan marka aan la hadlayno dadka goobta soo booqanaya - haweenka qaangaarka ah.
Qore: Kaaliyaha Qorista AI ee Kooxaha
Dad badan ayaa ku dara hagaha codka iyo qaabka oo ay la socdaan hagaha summaynta muuqaalka si shaqaalaha cusub ama qandaraaslayaasha ay u noqdaan kuwo joogto ah horumarinta nuxurka astaanta. Waxa laga yaabaa in si habsami leh loogu daro PDF oo la qaybiyay markii la codsado. Iyadoo taasi u muuqato mid faa'iido leh, maahan mid aad u badan ficil maadaama kaliya dadka xiisaynaya joogteynta codkaaga ay isticmaali lahaayeen codkaaga iyo qaabka aad u isticmaali lahayd.
Qoraa waa caqli-gal macmal ah (AI) kaaliyaha qorista ee kooxaha haysta wax kasta oo kooxdaadu u baahan tahay. Iyadoo ku xiran xirmada aad isku diiwaan geliso, waxaad heli kartaa sifooyinka soo socda:
Si toos ah u sax oo si toos ah u dhammaystir khaladaadka hingaadka, xarakaynta, iyo naxwaha.
Nabar jajaban - qaybo shakhsi iyo koox ah oo weedho ama qoraal caadi ah oo marar badan la isticmaalo.
Talooyin - talooyinka hagaajinta qoraalkaaga.
Eray bixinta - Qalabka maaraynta erey-bixinta ee shuruudaha la ansixiyay, la sugayo, iyo kuwa la diiday.
Habka Qorista - bartilmaameedyada wax-akhrinta, weynaynta, isku-darka, kalsoonida, iyo habaynta caddaynta.
Doorarka Kooxda - doorarka iyo oggolaanshaha horumarinta ereyadaada iyo habaynta codka vs isticmaalayaasha u baahan inay adeegsadaan.
Tilmaamaha qaabka - hage la marti galiyay, la daabacay, oo la wadaagi karo ee ururkaaga.
Qoraa wuxuu ku shaqeeyaa Chrome, Microsoft Word, iyo Figma. Waxay sidoo kale leeyihiin API adag oo ay ku dhex daraan qalabkooda hababka tifaftirkaaga.
Isku day Qoraa Lacag La'aan
Shaacinta: Waxaan ku xirnahay Qoraa waxaanan isticmaalayaa xidhiidhkayga ku xidhan maqaalkan oo dhan.
Tags: aixanaaqsirdoonka macmalhadafka astaantagarashada sumaddacodka sumaddachromefigmahubinta naxwahahaybiskaerayga microsoftqofhubinta xarakayntahiggaadhage styleisku macnoereyadamidabcodkahagaha codka iyo qaabkaqoraakaaliyaha qoraalka